Emilio Lara. Ajụjụ ọnụ onye edemede Sentinel nke Nrọ | Akwụkwọ ugbu a
Emilio Lara. Ajụjụ ọnụ onye edemede Sentinel nke Nrọ
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 13/10/2021 12:00 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede
Foto: Emilio Lara, profaịlụ Twitter.
Emilio lara ebipụtala n'afọ a Sentinel nke Nrọ, akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ya. Onye edemede jiennense aghọọla otu n'ime ihe kachasị mkpa na ụdị akụkọ ihe mere eme Ụmụnna nke Armada a na -apụghị imeri emeri, Onye na-emechi elekere na Puerta del Sol o Oge olile anya. Ana m ekele gị nke ukwuu maka obiọma gị na ịchọta oghere maka nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-agwa anyị ntakịrị ihe niile.
Emilio Lara - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Aha akwụkwọ akụkọ gị bụ Sentinel nke Nrọ. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
EMILIO LARA: Ihe edemede edemede bụ igbu mmadụ rụrụ site na Bekee ozugbo Agha Ụwa nke Abụọ. N'ime ụbọchị iri mbụ nke Septemba 1939, e gburu ihe karịrị nwamba na nkịta 800.000. Iji zere, ma ọ bụrụ na ndị Germany tụrụ ogbunigwe na London na obodo ndị ọzọ ma gbuo ma ọ bụ merụọ ndị nwe anụmanụ ahụ, anụ ụlọ bụrụ onye na -enweghị enyemaka. Bụ a ịchụ àjà nke ịhụnanya kpaliri, n'agbanyeghị na ọ na -agbagwoju anya. M zutere akụkọ ihe mere eme na -agụ akụkọ na mgbakwunye Sunday, achọpụtara m na enwere akụkọ jupụtara mmetụta. Nke a bụ ka akwụkwọ akụkọ m si amalite.
IHE: Ọ bụ onye na -agụ akwụkwọ ọchị, na akwụkwọ mbụ m gụrụ bụ Platero na mu, na akwụkwọ akụkọ ihe omimi nke Jules Verne, onye edemede masịrị m mgbe m na -amụ EGB.
IHE: M ka na -enwekwa obi ụtọ maka Miguel Ndị ahịa na valvaro Cunqueiro. N'ime oge, ndị ọzọ esonyela: Philip n'Ashterọt, Robert ili, García Márquez, Vargas Llosa, Juan Slav Galán, Arturo Pérez-Reverte...
IHE: Nke ọ bụla n'ime trilogy nke Hilary Mantel kwuru banyere Henry nke Asatọ.
IHE: Adịghị m freaky banyere nke ahụ. Ọ na -amasị m ịgụ n'akwụkwọ oche, na ezigbo eke ma ọ bụ ọkụ aka. Ana m ede ihe n'ọfịs m na kọmputa, ma were ndetu aka n'akwụkwọ ndetu. M na -agụ ma na -ede ọtụtụ ihe n'ihi na Ana m ahazi oge m M na -agbalịkwa ka m ghara imefusị ya na mkparị.
IHE: Ekwuru m na mbụ na ọ masịrị m ide ihe n'ọfịs m, ebe m nwere kọmputa wee chọta ebe dị jụụ. Kedu ka m nwere nnukwu ikike nkịtị Site na mkpọtụ na gburugburu ebe obibi, enwere m ike ịgụ ebe ọ bụla: m na -emikpu onwe m n'ime afụ.
IHE: N'ezie. Ọ ga -abụ ihe nwute (yana ihe nzuzu) na dịka onye na -ede akwụkwọ akụkọ mere eme, ọ gụghị ụdị ndị ọzọ. Leo akwụkwọ akụkọ ojii, ihe anyị nwere ike ịkpọ akwụkwọ ọgụgụ, akpaaka, ndi ochie nke akụkọ na ọtụtụ akụkọ na akụkọ.
IHE: Ugbu a Ọdachi, edemede ọhụrụ nke Niall Ferguson dere; Ndị .tali, nke Pérez-Reverte dere, y Laghachi na ebenke Antonio Muñoz Molina dere. Amalitere m ide a akwụkwọ akụkọ edobere na Modern Age.
Ndị: Kedu ka i chere ihe nkiri a dị?
EL: Ịlaghachi azụ mgbe nsogbu akụ na ụba na -eyi egwu malitere na 2008. Ọrịa coronavirus ahụ pụtara mmụba na ndepụta ịzụta akwụkwọ, nke dị mma maka mpaghara mbipụta na, na Spain, ahụrụ m ka ọ kwụsie ike. Ama m na enwere obi erughị ala n'etiti ndị edemede ọhụrụ na ndị na -achọ ịbụ, n'ihi na ha na -achọta ọtụtụ ihe isi ike ibipụta, mana oge niile siri ike ibipụta na nke mbụ ya. Ihe na -eme bụ na ugbu a ọnụọgụ ndị chọrọ ka ebipụta akwụkwọ akụkọ ha amụbaala.
IHE: Ọ naghị esiri m ike nke ukwuu n'ihi ọrụ m dị ka onye edemede na onye nkuzi, eritela m uru ọbụna site na ezumike ụfọdụ na njem nlegharị anya, n'ihi na o nyela m ohere iji nwayọ gụọ ma dee n'enweghị nsogbu ọ bụla. NA ọnọdụ ọjọọ ọ bụla dị mma iji nweta arụmọrụ ederede. Ihe niile dabere na imepụta ihe na ilekwasị anya nke onye edemede chọrọ iwere. Ee n'ezie, Enweghị m mmasị ọ bụla na akwụkwọ akụkọ nwere ike ịpụta maka coronavirus ma ọ bụ ọrịa na -efe efe nke afọ gara aga. Lee ntakịrị mmalite!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Emilio Lara. Ajụjụ ọnụ onye edemede Sentinel nke Nrọ
Federico Moccia: akwụkwọ
Daniel Defoe. Afọ ncheta ọmụmụ ya. Ụfọdụ iberibe